Maitiro ekugadzirisa nechinokonzera ngura uye ngura ye eccentric inobereka
Pamusoro peiyo eccentric inotakura ngura nzira yekudyira: pamusoro pakaoma: yakachena yakachena inogona kushandiswa sefa kuomesa Yakadzvanywa mweya, kana neyakaomeswa pa120 ~ 170 ° c tembiricha, uye pakupedzisira yakaoma nejira rakachena re gauze. CHIMWE CHINOKOSHA: kuchenesa kunofanira kuve pamwe nehunhu hwekutakura surfa ...Verenga zvimwe »
Kuisirwa nzira ye tapered roller inotakura
Kubereka kuisa: kutakura kuiswa kunofanira kuitwa munzvimbo yakaoma uye yakachena. Usati waiswa, nyatsoongorora nzvimbo dzekusvirana dze shaft neImba, magumo epafudzi, maburi, uye mhando yemachina yenzvimbo dzinobatanidza. Nzvimbo dzese dzekukwirana dzinofanirwa ...Verenga zvimwe »
Sarudzo yeceramic bhora rinotakura uye nyaya dzinoda kutariswa
Post nguva: Jul-08-2021
Parizvino, yakanyanya kushandiswa-yekumhanyisa chokurukisa inobereka ndeye hybrid ceramic bhora inobereka, kureva kuti, chinhu chinotenderera chinoshandisa kupisa kupisa kana kupisa isostatic kudzvanya Si3N4 zvedongo bhora, uye mhete yekutakura ichiri simbi yesimbi. Rudzi urwu rwekutakura rune zvakanakira kukwirisa kwakadzika, yakaderera p ...Verenga zvimwe »
Nemazvo chando rinopfungaira tekinoroji yekutakura mhete
Nemazvo chando rinopfungaira tekinoroji rudzi rwechando inoshanda yekuumba nzira yekuwana zvigadzirwa zvakapedzwa ne extrusion uye deformation yeplastiki yeakavanzika michina zvikamu munzvimbo yekupisa. Nemazvo kutonhora rinopfungaira kunogona kuita saizi uye chimiro cheiyo workpiece padhuze neyedzidziso kukosha kweiyo ...Verenga zvimwe »
yekunze idenderedzwa inobereka
Pamusoro pehunhu hwakanakisa, iyo yekunze idenderedzwa inobereka zvakare iri chaiyo chikamu. Kana ikasashandiswa mushe mukuita kwekushandisa, haizokundikana chete kuita izvo zvinotarisirwa mashandiro ekuita, asi zvakare inokuvadza zviri nyore iyo yakatenderera yakatenderera. Tinofanira kunge takateerera kune ...Verenga zvimwe »
Chii chakashata nemabhere? Ungazvigadzirisa sei? Mukugadzirwa kwemugodhi kushandisa crusher, panowanzo kuve nesando inobata, kuti chii chinonzi sando inobata? Iko kunonzi kutakura kukiya, ndiko kutakura mukuita r ...Verenga zvimwe »
Kuongorora kweKutakura Kuchenesa Uye Rotational Kuchinjika Chiyero cheiyo radial clearance yekutakura kwese hakusi nyore. Simba rekuyera rinokonzera kuti ferrule uye nemuviri unotenderera pachawo nekubatana kwayo kuve elast ...Verenga zvimwe »
Performance zvinodiwa zvemotokari inotakura mafuta
Performance Zvinodikanwa ZveMotokari Kutakura Girisi Mota inotakura girisi rudzi rwemiviri inogadzirwa nemafuta lithium base girisi yakagadzirirwa neakakosha maitiro, uye yakawedzerwa neazvino patent yekuwedzera. Zvinonzi zvikuru kushandiswa girisi ...Verenga zvimwe »